निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाली समाज- विचार - कान्तिपुर समाचार
भाद्र ११, २०७६ डा. रुद्र शर्मा
काठमाडौँमा जन्मिएकी कुनै महिला अमेरिकामा पढेर जापानी नागरिकसँग विवाह गरी जर्मनीमा स्थायी बसोबास गरेर रोजगार वा व्यवसाय गर्दै छिन् भने उनको हकमा कुन देशको कानुन लागू हुन्छ ? नेपालको कुनै परिवारका पाँच सदस्य जापान, अमेरिका, मलेसिया, सिङ्गापुर र नेपाल गरी पाँच देशमा बस्छन् भने उनीहरूले तत्तत् देशमा समेत सम्पत्ति आर्जन गरेको अवस्थामा उनीहरूको पारिवारिक अंशबन्डा गर्दा कुन–कुन देशको कानुन के–कसरी लागू हुन्छ ?
माथि उल्लिखित उदाहरण केही प्रतिनिधि सवाल मात्र हुन् । यस्ता समस्याले नेपाली समाज जेलिएको छ । नेपाली १७२ भन्दा बढी देशमा पुगेका छन् । संसारमा सायदै यस्तो सहर छ, जहाँ नेपाली नपुगेका होउन् । तसर्थ माथिका जस्तै सवाल आउने र त्यस सम्बन्धी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको कानुनी प्रणालीले समस्या भोग्दै आएको छ । तर २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी केही व्यवस्था भएपछि माथिका जस्तै समस्याले क्रमशः निकास पाउँदै जान सक्छन् ।
निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा फरक हुन्छ । सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दुई देशको सम्बन्धबारे हुन्छ । यसले एक देशले अर्को देशसँग गर्ने क्रियाकलापलाई नियमित र निर्देशित गर्छ । यसले धेरैजसो अवस्थामा माथि उल्लिखित सवाललाई सम्बोधन नगर्न सक्छ ।
तसर्थ त्यसको परिपूरकका रूपमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिपादन भएको हो । तर, निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरोधाभासपूर्ण छ, त्यसैले यसको अस्तित्व नस्विकार्ने तर्कहरू पनि भेटिन्छन् । राष्ट्रिय कानुनहरूलाई प्रयोग गर्ने अलि सीमित उपाय नै निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो । तसर्थ यसको छुट्टै रूप देख्न नसकिने हुनाले कतिपय विधिशास्त्रीले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको छुट्टै अस्तित्वलाई सहजै स्वीकार गर्दैनन् ।
निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई कानुनको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ ल) का रूपमा पनि चिनिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै नेपाली नागरिकले विवाह गर्न २० वर्षको उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर अर्को देशमा १८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने कानुन हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा १९ वर्षकी कुनै नेपाली महिलाले १८ वर्षमै विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएको देशको पुरुषसँग घरजम गरेर त्यतै गए त्यसलाई वैध वा अवैध के भन्ने ? नेपालको कानुन अनुसार सो विवाह गैरकानुनी हुनसक्छ भने अर्को देशको कानुन अनुसार वैध ।
यस्तो कानुनी द्वन्द्वको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने उपाय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुझाउँछ । निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य आयाम पनि छन् । जस्तै— द्विदेशीय व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान पनि यसै अन्तर्गत पर्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको विवाद समाधान संयन्त्रदेखि बाहेक वाणिज्य तथा लगानी सम्बन्धी प्रायः विवाद समाधानका उपाय निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्छन् । यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । कुनै अवस्थामा निजी वा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमध्ये कुन लागू भइरहेको छ भनी छुट्याउन पनि समस्या हुनसक्छ ।
नेपालीहरू संसारको जुनसुकै कुनामा बसेका भए पनि उनीहरूको नेपालसँग केही न केही सम्पर्क हुने, परिवार वा सम्पत्ति हुने कारणले पनि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व र आवश्यकता दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित कामकारबाहीमा पनि नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै विदेशीको नेपालमा मृत्यु भयो भने उसको अन्त्येष्टि गर्ने र उसको सम्पत्ति तथा दायित्वको प्रशासन गर्ने सम्बन्धमा पनि यही कानुनको आवश्यकता पर्छ ।
धेरै देशमा व्यक्तिको मृत्युपछि उसले छाडेको इच्छापत्र (विल) अनुसार उसको सम्पत्तिको प्रशासन गरिन्छ । एउटै व्यक्तिको सम्पत्ति एकभन्दा बढी देशमा भए मृतकको सम्पत्ति, दायित्व र उत्तराधिकार जस्ता विषयको प्रशासन गर्न अदालतमा गई प्रोवेटको निवेदन दिएर अदालतको आदेश बमोजिम मात्र गर्न सकिन्छ । कतिपय देशका कानुनमा जहाँ मृत्यु भएको हो, सोही देशको अदालतमा प्रोवेट निवेदन दिनुपर्छ । तर नेपालको अदालतमा प्रोवेटको प्रशासन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि कानुनले प्रस्ट पारिसकेको छैन ।
नेपालमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता नेपालीका लागि मात्र होइन, विदेशीका लागि पनि हुन्छ । नेपाल र विशेष गरी काठमाडौँ सहर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अभिन्न अङ्ग भइसकेकाले यहाँ बस्ने र कारोबार गर्ने विदेशीहरूका लागि नेपालको धेरैजसो कानुन आकर्षित नभए पनि केही खास अवस्थामा विदेशीको पनि कानुनी हक–अधिकार सिर्जना भएको हुन्छ । विदेशीलाई नागरिकको हक वा नागरिक सरहको हक हुँदैन, तर उनीहरूलाई पनि बासिन्दाको अधिकार हुन्छ । नागरिक र बासिन्दा फरक–फरक हैसियत र अवस्था हुन् ।
माथि उल्लिखित अवस्था विचार गरी मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । यो ऐनको दफा ६९२ अनुसार विदेशी, विदेशी वस्तु वा विदेशमा भएको काम समावेश भएको कुनै पनि विषय भए निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बद्ध व्यवस्था हुन्छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा नेपाल कानुन बमोजिम निर्धारित सक्षमता, योग्यता र सर्त पूरा गर्नुपर्छ भने, कुनै विदेशीले नेपालमा विवाह गर्दा आफ्नै नागरिकता रहेको मुलुकको कानुन पालना गर्नुपर्छ ।
विदेशमा भएको सम्बन्धविच्छेदले नेपालमा मान्यता पाउने व्यवस्था पनि छ । यो ऐनले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी धेरै कुरा समेट्ने प्रयास गरे पनि पर्याप्त भने छैन । यो ऐन पहिला अङ्ग्रेजीमा मस्यौदा गरी त्यसपछि मात्र नेपालीमा उल्था गरिएको हुँदा कतिपय शब्द नै बिरानो लाग्ने खालका छन् । कतिपय ठाउँमा सही अनुवाद नहुँदा पनि भन्न खोजिएको कुरा अस्पष्ट हुन्छ । तर अनुवादको गल्ती भयो वा मस्यौदामा त्रुटि भयो भन्दैमा फैसला गर्ने न्यायाधीशले पत्याउलान् ?
यस्ता गम्भीर सवाल विचारणीय छन् । यस्ता कमजोरीलाई नियमावली, निर्देशिका, विनियम आदि बनाएर प्रस्ट पार्नुपर्ने हो, तर यसतर्फ ठोस काम भएको छैन ।
सन् १८९३ मा सुरु भएको निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी हेग सम्मेलनदेखि नै यसको विकास र विस्तार भइरहेको पाइन्छ । यसले सीमापारि हुने व्यापार, दुष्कृति लगायत धेरै कुरालाई समेट्छ । हेग सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ र अन्तरसरकारी प्रयासहरूको पनि संयोजन गर्छ ।
तर नेपालमा भइरहेको अभ्यासलाई हेर्दा प्रत्येक दिन यस सम्बन्धी केही न केही नयाँ आयाम विकसित भइरहेका हुन्छन् । सूचना प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति र भूमण्डलीकृत (ग्लोबल) नागरिकको विकास भइरहेको अवस्थामा सोही बमोजिम यो कानुनको विकास र प्रयोग हुँदै जानुपर्छ ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०८:३९
‘साथीभाइसित भेटघाट र रमाइलो गर्न आइन्छ,’ उनले भने, ‘क्याफेको मुख्य आकर्षण लाइभ म्युजिक हो । परिकारले पनि लोभ्याउने गर्छ ।’ पारिवारिक वातावरणमा परिकार चाख्दै गीत सुन्दा आनन्द आउने उनले सुनाए ।